Homeराष्ट्रिय खबरमोदीजी, प,शुपतिनाथलाई साक्षी राखेर भन्नुस्– नेपालको भूमि एक इञ्च लिन्नौं
काठमाडौ । नेपाली जनताले आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको नक्सा प्राप्त गरेका छन् । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूचीमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको दिशामा, आफ्नो भू–भाग प्राप्तिको दिशामा चालिएको यो ऐतिहासिक पहलकदमी हो ।
यो कदम ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्न पुगेको छ । यसका निम्ति म सरकारलाई र यो निर्णयसम्म पुग्न योगदान पुर्‍याउनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो सबै प्रक्रियामा संविधान संशोधन विधेयकसहितलाई समर्थन गर्ने जो निर्णय गरेको छ, त्यसको स्वागत गर्दै प्रतिपक्षी दललाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अब हाम्रो मुख्य काम अतिक्रमण भएको भू–भाग प्राप्त गर्नु हो । त्यस दिशातर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा नै प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । राष्ट्रिय एकतासहित हामी सबै त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसका निम्ति सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।
नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको नक्सा अहिलेमात्रै किन प्रकाशित भयो ? भन्ने लाग्न सक्छ । हाम्रो त्यो भू–भाग अतिक्रमण हुँदा तत्कालै प्रतिवाद किन गरेनौं ? भन्ने लाग्न सक्छ । त्यो स्वाभाविक हो । यस सन्दर्भमा तीन वटा कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
पहिलो – नेपालको कुनै पनि शासक र सरकारले सुगौली सन्धि पछाडि कुनै सन्धि वा सम्झौता गरेर नेपालको कुनै भू–भाग कसैलाई दिएका छैनन् । यो कुरा स्पष्ट हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित हाम्रो पश्चिमी भू–भाग भारतद्वारा अतिक्रण भएको हो । त्यो अतिक्रमित भू–भाग हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ । अतिक्रमित भू–भागमा भएका विदेशी सैनिक र सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका सबै सामाजिक शक्तिहरू, नेपालका सबै देशभक्तहरू, नेपालका सम्पूर्ण जनता एक ठाउँमा छन् ।
तेस्रो– हाम्रा कमीकमजोरी कहाँनिर भयो होला ? हामीले त्यो भू–भागहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्ने ठोस पहल कदमीहरू अगाडि बढाउन किन सकेनौं होला ? भन्ने पीडाको अनुभूति हुन सक्छ ।
तर म सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सबै इतिहासविद्हरूलाई, नागरिक समाजलाई र सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु— कमजोरीको समीक्षा पछाडि गर्दै गरौंला । अहिले आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने बेला होइन । हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्का भएर यो ऐतिहासिक पहललाई भूमि प्राप्त गर्नेबिन्दुसम्म अगाडि बढाउन जरुरी छ । त्यसका निम्ति सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।